स्वास्थ्यविज्ञकाे सुझावः घरमा पनि मास्क प्रयोग गराैं - Web Tv Khabar
स्वास्थ्यविज्ञकाे सुझावः घरमा पनि मास्क प्रयोग गराैं
बैशाख २१, २०७८ मंगलवार ११:११ बजे
काठमाडौं । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनका मानिसलाई संक्रमण गर्न थालेको कोरोना भाइरससँग विश्वको स्वास्थ्य प्रणाली नै संघर्ष गरिरहेको छ ।पछिल्लो केही महिनायता भाइरसका विभिन्न परिवर्तित स्वरूप पुष्टि हुँदै आइरहेका छन् । अहिले विश्वभर भाइरस संक्रमण र त्यसबाट हुने क्षतिको त्रासमा विश्व सीमित छ । विश्वका अधिकांश देशमा मान्छेका गतिविधिहरू अत्यावश्यक काममा मात्रै सीमित भएका छन् ।
एसियाली राष्ट्रमा अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेको छ । जसमध्ये भारतलगायत अन्य राष्ट्रले दोस्रो लहरसँग सामाना गरिरहेका छन् । यससँगै नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले छोएसँगै कोभिड संक्रतिमले अस्पताल भरिभराउ छन् । आम सर्वसाधारणले सामान्य उपचार अस्पतालबाट पाउनै मुश्किल छ । देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा मानिसहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन् ।
घरमा मास्कको प्रयोग गर्दा के हुन्छ ?
स्वास्थ्य विज्ञकाअनुसार घरमा भएको समयमा मास्क लगाउनु हाम्रो स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त हुन्छ । कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेकाले आफूलगायत परिवारका सदस्यको संरक्षणका लागि पनि मास्क लगाउनु आवश्यक छ । संयुक्त परिवारमा एउटै कोठामा धेरै सदस्य बसिरहेका हुन्छन् । यसले कोरोना संक्रमणलाई बढावा दिन सक्छ । यस्तो समयमा घरमै पनि मास्क प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
कोरोना महामारीको यो क्षणमा जो कोही व्यक्ति पनि संक्रमित हुन सक्ने स्वास्थ्यविज्ञ बताउँछन् । कोरोना संक्रमितले मास्क लगाउन जरुरी छ । भीडभाड तथा जनघनत्व बढी भएको घर वा स्थानमा भएको समयमा मास्क लगाउनु पर्ने विज्ञको भनाइ छ । परिवारको कुनै एक सदस्य घर बाहिर जाँदा संक्रमण भित्रिने सम्भावना हुन्छ । जसले परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि संक्रमण हुने जोखिम हुन्छ । त्यसैले घरमै भएको समयमा पनि मास्क लगाउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।
विशेषज्ञकाअनुसार जो व्यक्ति घरभन्दा बाहिर जाँदैनन् वा खुल्ला ठाउँमा बसिरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा घरमा मास्क लगाउन आवश्यक छैन । तर घरको कोही सदस्य घरबाहिर जान्छन् । घरबाहिर गएर अन्य व्यक्तिसँग भेटघाट वा आवश्यक सामान खरिद गरिएको खण्डमा, घरमा मास्क लगाउन जरुरी छ ।
मास्कको प्रयोगले संक्रमणबाट बचिन्छ ?
मास्क लगाउनु संक्रमणबाट बच्ने सबैभन्दा सरल उपाय हो । तर व्यवहारिक रूपले हेर्दा हरेक समय मास्क मात्र लगाएर बस्न भने असहज हुन्छ । मास्क लगाएर कसरी बस्ने भनेर धेरै व्यक्तिले जिज्ञासा पनि राख्ने गरेका छन् । जब हामी कोठामा एक्लै हुन्छौं । हामीले मास्क फुकाल्न सक्छौं । तर भीडभाड भएको ठाउँमा भने मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिले पनि घरमा मास्क लगाउन आवश्यक छ ?
यदि परिवारका सम्पूर्ण सदस्यले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइसकेका भए घरमा मास्क लगाइ राख्न आवश्यक छैन । अमेरिकाको सेन्टर्स फर डिजेज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनकाअनुसार कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका परिवारका सदस्यले घरमा मास्कको प्रयोगविना एकअर्कासँग घुलमिल भएर बस्न सक्छन् । कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनुको मुख्य फाइदा भनेकै घरमा मास्क लगाउन नपर्ने भएकाे सीडीसीकाे भनाइ छ ।
कस्तो प्रकारको मास्क लगाउने ?
एन नाइन्टी फाइव मास्क खरिदमा महंगो पर्छ । यसको प्रयोग सबैको पहुँचमा नहुन सक्छ । तर विशेषज्ञकाअनुसार भल्व विनाको एन ९५ मास्कले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सुरक्षित राख्छ ।
एन ९५ मास्क र सर्जिकल मास्क ध्यानपूर्वक लगाउन आवश्यक छ । मास्क लगाउँदा नाकको मुनितिर नलगाउन विज्ञले सुझाएका छन् । यदि मास्क नाक मुनितिर लगाइँछ भने यसले हामीलाई कुनै प्रकारको सुरक्षा दिँदैन ।
यदि मास्क लगाइसकेपछि चश्मामा बाफ जम्मा भइरहेको भए मास्क फिट नभएको बुझ्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा मास्कलाई राम्रोसँग नाक र मुखमा फिट हुने तरिकाले मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
कुन ठाउँमा कस्तो मास्क प्रयोग गर्ने ?
स्वास्थ्य विज्ञकाअनुसार कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भएको ठाउँमा एन ९५ मास्कको प्रयोग गर्न उचित हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा तीन लेयर भएको सर्जिकल मास्क लगाउनु पर्छ ।
कतिपय व्यक्तिले कपडाको मास्क मात्र लगाएको देखिन्छ । तर कपडाको मास्क लगाएर मात्र नहुने विज्ञको भनाइ छ । सर्जिकल मास्कको माथिबाट कपडाको मास्क लगाउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
घरभित्रै बस्नेहरूलाई संक्रमण भइरहेको छ ?
कोही व्यक्ति घर बाहिर गएको छैनन् । तर पनि कोरोना संक्रमण भइरहेको छ । यो के कारणले भइरहेको छ ? भनेर धेरैको जिज्ञासाको सुनिन्छ ।
कोरोना भाइरसबारे अध्ययन गरिरहेका विज्ञकाअनुसार यसको दुईवटा कारण हुन सक्छन् । एउटा कारण घरमा आएका अन्य व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण हुनसक्छ । अर्को ड्रपलेट इन्फेक्सनको कारणले हुने गर्छ ।
ड्रपलेट संक्रमण ठूला कण हुन् । ड्रपलेट प्रसारण भनेको भाइरसयुक्त श्वासप्रश्वासको थोप्लाहरू (ठूलासाना थोपा र कणहरू) संक्रमित व्यक्तिद्वारा श्वास छोड्दा ती अणु हाम्रो वरिपरी खस्छन् । यसले गर्दा संक्रामण व्यक्तिको नजिक हुँदा संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्ता कणहरू करिब ३ वा ६ फिटको दुरीसम्म रहन्छन् । त्यसैले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न सामाजिक दुरी कायम गर्न विज्ञले सुझाएका हुन् ।
घरमा हुँदा मास्क लगाउनु पर्ने कुनै वैज्ञानिक कारण छ ?
विशेषज्ञकाअनुसार यसको वैज्ञानिक कारण सुन्नमा आएको छैन । तर सामान्य अर्थमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अवलम्बन गर्नु कोरोना भाइरसबाट जोगिने उत्तम विकल्प हो ।
घरमै सुरक्षित रहनका लागि मास्कको प्रयोग बाहेक अन्य के गर्ने ?
स्वास्थ्य विशेषज्ञकाअनुसार श्वासप्रश्वास सम्बन्धी व्यायाम गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या देखिए चिकित्सकको निगरानीमा लक्षणअनुसारको उपचार गराउनु पर्छ । कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेकोले घरमै बसेर चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ । एजेन्सीकाे सहयाेगमा